Kedu ihe bụ Nofollow, Dofollow, UGC, ma ọ bụ Njikọ Nkwado?
Kwa ụbọchị, igbe ozi m jupụtara na spam ụlọ ọrụ SEO ndị na-arịọ arịrịọ itinye njikọ na ọdịnaya m. Ọ bụ ọtụtụ arịrịọ na-adịghị agwụ agwụ ma na-akpasu m iwe. Nke a bụ otu email si aga…
Ezigbo Martech Zone,
Achọpụtara m na ị dere edemede a dị ịtụnanya na [isiokwu]. Anyị dere ederede ederede na nke a. Echere m na ọ ga-eme nnukwu mgbakwunye na edemede gị. Biko mee ka m mara ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịkọwa isiokwu anyị na njikọ.
Nke mbụ, ha na-ede edemede ahụ oge niile dị ka a ga - asị na ha na - achọ inyere m aka ma melite ọdịnaya m mgbe m maara kpọmkwem ihe ha na - achọ ime… backlink. Ọ bụ ezie na engines ọchụchọ na-egosipụta ibe gị nke ọma dabere na ọdịnaya ahụ, ibe ndị ahụ ga-edozi site na ọnụọgụ nke saịtị dị mkpa, nke dị elu nke jikọtara ha.
Kedu ihe bụ njikọ Nofollow? Soro Link?
A Nofollow njikọ eji ya na njigide arịlịka HTML iji gwa injin nchọgharị ka ọ ghara ileghara njikọ ahụ anya ma a bịa na ịgabiga ikike ọ bụla na ya. Nke a bụ ihe ọ dị ka ya na HTML:
Ugbu a, dị ka ihe njin nchọgharị na-awagharị na peeji m, na-edepụta ọdịnaya m, ma na-ekpebi backlinks iji nye ikike azụ na isi mmalite… ọ na-eleghara nofollow njikọ. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ejikọtara m na peeji ebe a na-aga n'ime ọdịnaya edere m, mkpado arịlịka ndị ahụ enweghị njirimara nofollow. A na-akpọ ndị ahụ Njikọ Dofollow. Site na ndabara, njikọ ọ bụla gafere ikike ogo belụsọ na agbakwunyere àgwà rel, yana ekpebie ogo njikọ ahụ.
N'ụzọ na-akpali mmasị, a na-egosipụtakarị njikọ nofollow na Google Search Console. Nke a bụ ihe kpatara ya:
Ya mere Dofollow Links Anywhere Nyere Aka Nhazi M?
Mgbe achọtara ikike ịchịkwa ogo site na backlinking, ụlọ ọrụ otu ijeri dollar bidoro n'otu abalị iji nyere ndị ahịa aka ịkwalite ọkwa ha. Companieslọ ọrụ SEO akpaghị aka ma wuo njikọ ugbo ma banye na gas iji mezie engines ọchụchọ. N'ezie, Google chọpụtara… na ya niile bịara n'iyi ala.
Google meziwanye algọridim ya iji nyochaa ogo nke saịtị nke kpokọtara backlinks na dị mkpa, ikike ikikere. Ya mere ,, no… na-agbakwunye njikọ dị n'ebe ọ bụla agaghị enyere gị aka. Inweta backlinks na saịtị dị oke mkpa ma nwee ikikere ga-enyere gị aka. Dị nnọọ na-abụghị, njikọ spamming ga-emerụ gị ikike ọkwá ebe ọ bụ na Google ọgụgụ isi nwekwara ike ịmata ọdịiche aghụghọ na ịta gị ahụhụ maka ya.
Ihe Njikọ Njikọ ahụ Ọ Dị Ihe O Mere?
Mgbe ndị mmadụ nyefere m isiokwu, m na-ahụkarị ka ha na-eji mkpụrụ okwu doro anya gabigara ederede ederede ha. Ekwenyeghi m na algorithms nke Google di njo karie na ederede di na njiko gi bu nani ogugu isi okwu. Ọ gaghị eju m anya ma ọ bụrụ na Google nyochaa ọdịnaya gburugburu gburugburu njikọ ahụ. Echeghị m na ọ dị mkpa ka njikọta gị wee pụta ìhè. Mgbe obula enwere obi abuo, a na m akwado ndi ahia m ka ha mee ihe kachasi nma nye onye gua ya. Ọ bụ ya mere m ji eji bọtịnụ mgbe m chọrọ ka ndị mmadụ hụ ma pịa njikọ mpụta.
Echefula na ihe njigide arịlịka na-enye ha abụọ ederede yana a aha maka njikọ gị. Aha a bụ njirimara nnweta iji nyere ndị na-agụ akwụkwọ aka ịkọwa njikọ nke ndị ọrụ ha. Agbanyeghị, ọtụtụ ihe nchọgharị na-egosipụta ha. SEO gurus ekwenyeghi na itinye ederede ederede nwere ike inyere gị aka maka isiokwu ejiri. Kedu ụzọ ọ bụla, echere m na ọ bụ nnukwu omume ma na-agbakwunye obere pizazz mgbe mmadụ na-ejikọ njikọ gị ma na-enye onyinye.
Kedụ Banyere Njikọ Ndị Akwadoro?
Lee email ọzọ m na-enweta kwa ụbọchị. M n'ezie na-aza ndị a… na-arịọ onye ọ bụrụ na ha na-n'ezie na-arịọ m ka m tinye aha m n'ihe ize ndụ, ina fined site ọchịchị, ma na-delisted si search maqbx chekwebe. Ọ bụ arịrịọ nzuzu. Ya mere, mgbe ụfọdụ m na-aza ma gwa ha na m ga-enwe obi ụtọ na ya… ọ ga-dị nnọọ efu ha $ 18,942,324.13 kwa backlink. Aka m na-eche ka mmadụ kwụnye ego.
Achọpụtara m na ị dere edemede a dị ịtụnanya na [isiokwu]. Anyị ga-achọ ịkwụ gị ụgwọ itinye njikọ na edemede gị iji tụọ aka na edemede anyị [ebe a]. Ego ole ka ọ ga-eri iji kwụọ maka njikọ dofollow?
Nke a na-akpasu iwe n'ihi na ọ na-arịọ m ka m mee ihe ole na ole:
Imebi Usoro Ọrụ Google - Ha na-agwa m ka m gbanwee njikọ m akwụ ụgwọ na ndị na-arụ ọrụ Google:
Njikọ ọ bụla ezubere ịmegharị PageRank ma ọ bụ ogo saịtị na nsonaazụ ọchụchọ Google nwere ike ịtụle akụkụ nke atụmatụ njikọ yana mmebi nke Google Ntuziaka Webmaster.
Atụmatụ Google Link
Emebi Iwu Federal - Ha na-agwa m ka m mebie ụkpụrụ nduzi FTC na endorsements.
Ọ bụrụ na enwere njikọ dị n'etiti onye na-akwado ya na azụmaahịa ndị ahịa agaghị atụ anya na ọ ga-emetụta etu ndị ahịa si enyocha nkwenye ahụ, ekwesịrị ịkọwa njikọ ahụ.
FTC Nkwado Nkwado
Emebi ntụkwasị obi nke ndị na-agụ akwụkwọ m - Ha na-agwa m ka m ghaara ndị na-ege m ntị ụgha! Ndị na-ege m ntị m rụụrụ ọrụ afọ 15 iji wuo ndị na-eso ụzọ ma nwee ntụkwasị obi na ya. Ọ bụ ihe a na-apụghị ime eme. Ọ bụkwa kpọmkwem ihe mere ị ga - eji hụ m gosipụta mmekọrịta ọ bụla na isiokwu ọ bụla - ma ọ bụ njikọ mmekọ ma ọ bụ enyi na azụmaahịa ahụ.
Google jiri jụọ na njikọ nkwado na-eji nofollow àgwà. Agbanyeghị, ha agbanweela nke a ugbu a ma nwee ụdị nkwado ọhụrụ maka njikọ akwụ ụgwọ:
Mark njikọ ndị bụ mgbasa ozi ma ọ bụ nkwụnye ụgwọ (nke a na-akpọkarị njikọ akwụ ụgwọ) na ọnụahịa nkwado.
Google, Ruru Egwu Ọpụpụ Njikọ
Ejiri njikọ ndị ahụ dịka ndị a:
Kedu ihe kpatara na ndị ji azụ azụ anaghị ede ihe?
Mgbe izizi tụlere PageRank na blọọgụ kwagara ebe ahụ, ịza ajụjụ bụ ihe a na-ahụkarị. Ọbụghị naanị na ọ bụ ebe etiti iji nwee mkparịta ụka (tupu Facebook na Twitter), ọ gafere ọkwa mgbe ị mejupụtara nkọwa onye edemede gị ma tinye njikọ na nkọwa gị. A mụrụ spam na-aza ajụjụ (ọ ka bụ nsogbu n'oge a). O teghị aka tupu sistemu njikwa ọdịnaya yana sistemụ ikwu okwu malitere njikọ Nofollow na profaịlụ onye edemede na nkọwa ya.
Google amalitela n'ezie ịkwado àgwà dị iche iche maka nke a, ugc. UGC bu ebumnuche nke Usoro Onye Emeputara.
I nwekwara ike iji njikọta nke njiri mara. Na WordPress, dịka ọmụmaatụ, nkọwa dị ka nke a:
Mpụga bụ njirimara ọzọ ka ndị na-akpụ akpụ mara na njikọ ahụ na-aga ihe mpụga saịtị.
I Kwesịrị Domeghachi azụ azụ iji nweta ọtụtụ njikọ Dofollow?
Nke a bụ eziokwu bụ nnukwu esemokwu na m. Ozi ịntanetị spammy m nyere n’elu na-ewe iwe n’ezie ma enweghị m ike ịnagide ha. Ekwenyesiri m ike na ịkwesịrị irite njikọ, ajụla maka ha. Ezigbo enyi m Tom Brodbeck kpọrọ aha a nke ọma mmụta. M na-ejikọ ọtụtụ puku saịtị na isiokwu na saịtị m… n'ihi na ha nwetara njikọ ahụ.
Nke ahụ kwuru, Enweghị m nsogbu ọ bụla na azụmaahịa na-abịakwute m ma na-ajụ ma ọ bụrụ na ha nwere ike ide otu isiokwu bara uru nye ndị na-ege m ntị. Na, ọ bụghị ihe omimi na enwere dofollow njikọ n'ime isiokwu ahụ. Ana m ajụ ọtụtụ isiokwu n'ihi na ndị na-enyefe na-enye akụkọ jọgburu onwe ya na backlink doro anya na ya. Mana m na-ebipụta ọtụtụ ndị ọzọ bụ akụkọ dị egwu na njikọ nke onye edemede ahụ jiri ga-aba uru nye ndị na-agụ m.
Anaghị m eme ozi ọma… ma enwere m ihe njikọ 110,000 na-ejikọ azụ Martech Zone. Echere m na nke ahụ bụ ihe akaebe banyere ogo nke isiokwu m kwere na saịtị a. Wepụta oge gị bipụtara ọdịnaya dị ịrịba ama remarkable na backlinks ga-eso.
Tags: njikọ azụlinknjikọ azụbacklinksikwu njikọngosidofollownjikọ dofollowụlọ ọrụ gọọmentị etitiftcgoogle search njikwagoogle usoro ọrụgoogle +njikọ ịkpataNjikọ njikọnjikọ-ụlọnofollownofollow njikọnhazi ọchụchọakwụ ụgwọ njikọnjikọ njikọkpọlrel dofollowrel nofollowrel nkwadorel ugcndị na-arụ ọrụ nyocha engineọchụchọ ọkwankwado njikọuGCnjikọ ugcdofollow wordpressWordPress nofollow
Jenụwarị 21, 2007, elekere 1:35 nke abalị
Daalụ maka igosi Dofollow plugin Doug. Amaara m na WordPress gbakwunyere rel = "nofollow" na njikọ na nkwupụta, ana m ekwenye n'ezie na echiche gị na ọ bụrụhaala na a na-edozi okwu, njikọ ọ bụla dị mkpa fọdụrụ na nkwupụta kwesịrị otuto ha ruru.
Jenụwarị 22, 2007, elekere 2:42 nke abalị
Daalụ maka ndụmọdụ ahụ; Awụnyere m nkwụnye ahụ (usoro enweghị mgbu.)
N'ajụjụ ọnụ onye spammer kwuru:
"Atụmatụ Google, Yahoo na MSN, ịsọpụrụ" njikọ "adịghị eso" ọ ga-emeri Sam na ndị yiri ya? "Echeghị m na ọ ga-enwe mmetụta dị ukwuu na mkpụmkpụ, ọkara ma ọ bụ ogologo oge."
Ajụjụ ọnụ a juru ebe a:
Jenụwarị 22, 2007, elekere 5:56 nke abalị
Martin, ọmarịcha akụkọ. M na-eche otú ọrụ ya sirila sie ike n'afọ gara aga!
Feb 24, 2007 na 6:22 PM
Enwere ụzọ isi họrọ njikọ m chọrọ ka e soro ya (wow, mwube asụsụ na-achọsi ike)? Ihe kpatara ya bụ mgbe m na-ezo aka ụfọdụ saịtị crappy nwere ozi na-adịghị mma na ya, ọ ga-akara m mma ịkwalite ya nke ukwuu. Ọ bụghị dị ka censorship (ọ bụrụ na m na-ezo aka, sịnụ, ndọrọ ndọrọ ọchịchị echiche nke dị nnọọ iche karịa nke m, ma ọ bụrụ na ọ tọrọ ntọala na nke ọma, enweghị m nsogbu na-akwalite ya), ma dị ka ụzọ ọgụ entropy na igwu ala. crappy ọdịnaya.
Enweghị m nsogbu iji aka dezie njikọ. M na-emekarị dezie ihe ka ịgbakwunye Google Analytics oku njikọ, njikọ utu aha na idozi ọbịa typography, ma ọ ga-adị mma ka akpaaka ya ruo n'ókè ụfọdụ.
Feb 24, 2007 na 6:52 PM
N'ezie, Ug! Ị nwere ike tinye rel = "nofollow" n'ime njikọ ọ bụla ị chọghị ka Google tinye ọkwa. Ọmụmaatụ:
Feb 24, 2007 na 7:22 PM
Ee, nke ahụ nwere ike ịdị mfe karịa ịnwale ihichapụ ha. M na-edobe ihe niile a na-ejikarị eme ihe na ndetu Opera m (ọ dị mfe ịnweta ibe n'ibe, iberibe na koodu snippets n'ime ihe nchọgharị gị mgbe niile), yabụ na ọ bụ naanị m copy-paste.
Feb 28, 2007 n’elekere 12:55 nke abali
Achọtara m nke a. Kwesịrị ịlele tupu ịkpọtụrụ gị site na mpempe kọntaktị.
Ekwenyere m Doug. Ọ bụrụ na ị na-aga nsogbu nke ịgụ na imezi okwu ọ bụla (nke ị kwesịrị ịbụ) mgbe ahụ ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iji njikọ kwesịrị ekwesị kwụọ ụgwọ ezi okwu.
Ị ga-enwetakwu okwu "Great post" n'ihi nke a, mana ndị ahụ na-abanye ozugbo n'ime ebe a na-emegharị ihe.
Ndị spammers doro anya nwere aha dị ka "ọkachamara SEO" ma ọ bụ "Web design Atlanta" ma ọ bụ ihe ejiri okwu. Ezigbo ndị na-enwekarị ezigbo aha dịka "Lisa" ma ọ bụ "Robert".
Ọ dị mma na ị kwụgoro n'okwu a na-esoghị. Okwu ọ bụla na nsonaazụ ya? Ị nwetara rịzọlt ị bu n'obi?
Nsonaazụ agaghị adị m mkpa dịka ha ga-adị ka unu! Ikwu okwu na saịtị m kwesịrị inye aka na ọkwa Google gị.
ọka wheat n'efu
M na-agba ọsọ na ebe nrụọrụ weebụ Drupal kwadoro, ya mere ọ na-arụnye na-enweghị rel = nofollow, ma ị ga-etinye ngwa mgbakwunye iji tinye nke a. Ọ bụ ezie na m na-eme nke a ruo nwa oge, ma achọpụtara na naanị ihe kpatara ime nke a bụ echiche efu na ihe ndị m na-ahapụ na saịtị ndị ọzọ anaghị enye m ọkwa ibe, ebe m na-enye ha ọkwa ibe. Ekpebiri m ịhapụ ya ka ọ dị.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-emegharị ihe ha kwuru, gịnị kpatara ị ga-eji taa ndị na-ewepụta oge hapụ okwu bara uru na saịtị ahụ ntaramahụhụ?
Etinyere m iwu ịza ajụjụ na saịtị m ka ọ ghara iwe m iwe maka ihichapụ ihe ndị dị na mpaghara isi awọ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ ahapụ nkwupụta nke na-ekwu "saịtị mara mma", ana m atụ aro ka ihichapụ nkwupụta ahụ, ọ gwụla ma ha hapụrụ URL ahụ oghere. Enweghị iwu dị otú ahụ, ọ dị m ka a manyere m ịlele njikọ ahụ wee kpebie dabere na saịtị ahụ.
Mee 21, 2007 na 11: 38 PM
Daalụ maka ozi ahụ, m na-achọsi ike.
Ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu na a ka ga-edepụta ibe akwụkwọ site na mkpado adịghị eso. Nke a ọ bụ eziokwu?
Mee 22, 2007 na 6: 33 AM
Ee, ọ bụghị ngwa ọchụchọ niile na-asọpụrụ mba-eso. Ọ na-eme na Google, ịbụ nnukwu nwa nwoke na ngọngọ, na-eme. Amaghị m maka Live, Ask ma ọ bụ Yahoo! Nwere ike were ụfọdụ igwu ala iji chọpụta.
Jun 20, 2007 na 5: 10 PM
Ezigbo ọrụ – Abụ m onye na-emegide nofollow.
Ekwesịrị ịgụta njikọ ọ bụla, ma ọ bụ na ị gaghị ekwe ka njikọ ahụ dị. Amaara m ndị mmadụ na-ama ụma tinye nofollow na njikọ dị n'ime posts ha ka ha wee ghara inwe ọtụtụ njikọ na-apụ apụ, yana echiche na saịtị ndị na-ejikọta karịa karịa ka ejikọtara ha iji nweta PR dị ala.
Ọ na-ewute m ruo ọgwụgwụ.
Jun 23, 2007 na 2: 04 PM
Anyị emela otu ihe ahụ na blọọgụ akụkọ anyị na-enweghị ihe ọ bụla ma ọ bụghị nsonaazụ dị mma n'ihe gbasara ntinye aka onye ọrụ na ihe ọ juiceụ . 🙂
Jul 16, 2007 na 7: 34 AM
IMO rel = "nofollow" bụ ihe na-abaghị uru, ọ gaghị akwụsị spam ikwu okwu n'ihi na ndị spammers na-eji ngwanrọ. Ihe ngwọta kachasị mma megide ndị spammers kwuru bụ plugins dị ka Akismet, Omume ọjọọ na captchas ma ọ bụ ajụjụ mmadụ.
Jul 22, 2007 na 3: 01 AM
ee? ndị nzuzu wiki?s!
na-eche ihe ga-eme ma ọ bụrụ na anyị niile na-eji nofollow ha?
Jul 29, 2007 na 3: 30 AM
Ndewo, ọ ga-amasị m ịjụ ma WordPress, Yahoo 360, Blogger, wdg. na-eji "nofollow" na blọgụ posts. ntụgharị Ọ bụrụ na m dee akwụkwọ ozi na blọọgụ m wee tinye njikọ na ya, njikọ dị na post m ọ gbanwere na rel=nofollow?
Ọgọstụ 6, 2007 na 10:50 ehihie
Daalụ nke ukwuu maka akụkọ mara mma gbasara àgwà anaghị eso. N'ihi na etinyere ya dị ka ndabara na WordPress, echere m na ọtụtụ ndị mmadụ amaghịdị na ọ dị.
Echere m na atumatu nke ikwe ma ọ bụ jụ ikwu okwu n'otu n'otu kama iwetu ha niile bụ ụzọ ka mma.
Ọgọstụ 15, 2007 na 3:00 ehihie
Daalụ maka post a! Ama m na abịabeghị m n'azụ ịchọta ya, mana m malitere ịde blọgụ na m na-agbalị ịchọpụta ihe kpatara heck wordpress na-etinye nofollow na njikọ m. Aga m etinye dofollow ekele maka ịchọta blọgụ gị, ikekwe nke ahụ ga-akwadokwu nkọwa na mmekọrịta na blọgụ ọhụrụ m.
Aug 16, 2007 na 10: 22 AM
Ejighị m n'aka na ọ na-enyere aka ozugbo na nsonye. Echere m, Otú ọ dị, na 'nnụnụ nke nku na-efekọ ọnụ' ya mere ị ga-enwe ike ijikọ na sonye na blọọgụ ndị ọzọ na-adịghị eji nofollow. N'ikpeazụ, echere m na ọ bara uru.
Ọ masịrị m nke ukwuu n'ihi na m kwenyere na ọtụtụ n'ime ihe ịga nke ọma m na ịde blọgụ emewo ka òkè ndị mmadụ dị ka gị na mkparịta ụka ahụ. Gịnị mere m ga-eji nweta uru niile ?!
Ọgọstụ 26, 2007 na 6:58 ehihie
Daalụ maka ozi a Doug, ejiri m aka na-agbakwunye mkpado rel na njikọ m mana echetụbeghị m usoro a maka nkọwa. Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, enwere m ike ịmalite ime nke a ebe ọ bụ na m na-edozi okwu m n'ọkwa dị ukwuu.
Sep 10, 2007 na 8: 48 AM
Ndewo, etinyere m ngwa mgbakwunye DoFollow ụbọchị ole na ole gara aga, ana m enweta ekele site na ụfọdụ obere blọọgụ m jikọtara na isiokwu na nkọwa m.
Nnukwu ụzọ kwa, mana naanị yana njikọta yana nkọwa siri ike / njikwa onye ọrụ, ma ọ bụghị ya, blọọgụ ga-aghọ isi iyi spam ngwa ngwa karịa ka anyị chere.
Disemba 13, 2007 na 8:31 mgbede
Doug, a nofollow ihe n'ezie kemgbe na-egbu mgbu maka ma ndị na-ede blọgụ na legit nkọwa… i just wish someone might create a plugin that will enable/disable nofollow at the admin's will. All nofollo plugins m jiworo dọkapụ mkpado nofollow na nkwupụta na/ma ọ bụ onye na-ekwu okwu niile. dị ka i kwuru, ụfọdụ ndị na-achọsi ike n'ịkwado ihe ndị ọrụ ha kwuru
Dee 14, 2007 na 3: 15 AM
Ekwenyere m, Jessie! WordPress enwetala nzaghachi ahụ n'olu dara ụda ma doo anya, ma echere m na ha nwere ike ịnwe nrụgide site na Search Engines ka ha ghara ime nhọrọ ahụ.
Dee 14, 2007 na 5: 52 AM
ihe na-atọ ọchị Doug bụ na ọtụtụ n'ime ndị "na-akwado" nofollow nwere nofollow attribs na ha na saịtị / blọọgụ…. ọ bụghị ihe ọchị ka ndị mmadụ na-ekwu ihe na-eme ọzọ? u nwetara mmasị m maka inwe dofollow ebe a dị ka na blọọgụ m… ejighị m n'aka otú nke a ga-esi metụta PR m na google.
Feb 3, 2008 n’elekere 3:42 nke abali
Daalụ maka ịkọwa nke a. Ana m amalite webụsaịtị, ana m ele nhọrọ blọgụ niile. Ọ dị nwute na sọftụwia blọọgụ mkpọ m nwere ike iji na saịtị m na-esi ísì na ice, ana m eche echiche iji wordpress, yabụ daalụ maka ikwu okwu banyere ihe ndị a ma ọ bụ enweghị nsogbu. Enwere m ebe nrụọrụ weebụ 2, nke na-enweghị njikọ azụ google, na ụbọchị nke ọzọ saịtị m nke abụọ gosipụtara 10 google backlinks na-acha anụnụ anụnụ, na enwere m obi ụtọ n'ezie! M biputere na blọọgụ oge niile ma amaghịdị na ị nwere ike nweta njikọ n'ụzọ ahụ, (duh, newbie!) Na mberede, enwere m njikọ 10 sitere na Dawud Miracle - onye nọ na heck bụ ???? M soro njikọ ahụ laghachi na saịtị ya wee chọpụta na ọ bụ otu n'ime ọtụtụ blọọgụ m debere na ya, daalụ Miracle, ọ bụ ọrụ ebube !!! Mgbe ahụ, m nọ na-eche otú o si mee, na ihe mere na ọ na-emebeghị mbụ! Yabụ ugbu a enwetara m ya. Mgbe m nwetara ngwanrọ blọọgụ m, m ga-enwerịrị ihe ndị a, ọ bụghị ụdị na-esoghị. Enwere ihe ịga nke ọma maka anyị niile….